Ahoana no filalaovana lalao Windows amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba filalaovana lalao Windows amin'ny Linux
Raha te-hihazakazaka ny lalao Windows dia mila ny fanampian'ny fitaovana maro: VOLA, Dx divay, Winetrika ary LutrisAmin'ity fampianarana ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana sy fanamboarana tsirairay amin'izy ireo.
1 Fampidirana ny divay
1.1 Fampiasana RAM kokoa
1.3 Lalao ho an'ny Windows
1.4 Windows hafa ho an'ny lalao tsirairay
1.5 Ny mpamily video Windows dia tsara kokoa noho ireo Linux
2 Torolàlana divay
2.1 Direct X
2.2 Visual Basic, .Net, sns.
2.3 Amboary ny safidinao divay
2.4 Fampidirana an'i Lutris
Fampidirana ny divay
Araka ny fantatry ny rehetra, tsy manohana rakitra .EXE i Linux. Ka ahoana ny fandehanan'ny programa Windows? Eny, ireo jeneraly sasany dia nanao programa antsoina hoe WINE, izay midika fa ny emulator dia tsy emulator, izay iray amin'ireo fomba fampandehanana programa Windows ao ambanin'ny Linux.
Fa, raha tsy emulator dia ahoana no anaovany azy?
Ny antony tsy emulator ny divay dia ny emulateur dia mazàna mandika ny tontolo iainana misy ny programa, ao anatin'izany ny fanahafana ny mari-trano microprocessor omena. Ny divay kosa dia mampihatra ilay antsoina hoe takelaka mifanentana izay manome safidy hafa ho an'ireo tranomboky Windows.
Tsara kosa izany? Eny sy tsia. Andao hiresaka fahamarinana roa isika ...
Fampiasana RAM kokoa
Windows (amin'ny iray amin'ireo dikanteny misy azy) dia manana programa marobe marobe ao anaty memo RAM izay matetika tsy mavesatra ny Linux (vakio, antivirus, antimalware, sns.). WINE, tsy manao an'izany. Vokatr'izany dia mandany loharano vitsy noho ny Windows izy.
Direct X no API be mpampiasa indrindra amin'ny lalao Windows ary tsy miankina amin'ity rafitra miasa ity. Linux, amin'ny lafiny iray, dia mampiasa OpenGL.
Ka ahoana ny fomba fihazakazaky Linux lalao mitaky DirectX raha OpenGL ihany no ampiasainy? Eo no idiran'ny majikan'ny divay: mahatonga an'i OpenGL hanahaka ny DirectX izy io.
Ny vokany? Mazava ho azy, rehefa maka tahaka ianao dia very fampisehoana.
Mihazakazaka kokoa amin'ny Windows ve ny lalao? Holazaiko aminao fa miankina amin'ny lalao izany. Na izany aza, ny valiny dia ENY, noho ny fanahafana Direct Direct .. Azonao atao ny milaza fa ny lalao mifototra amin'ny Direct X 7 dia miasa mitovy amin'ny Windows sy Linux, fa amin'ny DX9 kosa dia miovaova be ny zavatra: manodidina ny 20% kely fampisehoana.
Lalao ho an'ny Windows
Tena sarotra ho an'ny divay ny mihazakazaka ny lalao miaraka amin'ity rafitra ity. Noho io antony io, mandraka androany, tsy mandeha izy, ohatra, lalao toa ny Street Fighter IV, Resident Evil 5 na Gear of Wars.
Windows hafa ho an'ny lalao tsirairay
Tombony iray ananan'i WINE dia raha te hanana lalao taloha ianao amin'ny Windows 95, ary vaovao amin'ny Windows 7.
Ary tsy mijanona eo ihany ny safidy fa mamela ihany koa ny fametrahana programa hafa, toy ny rafitra, ny directx, ary ny zavatra hafa rehetra azonao eritreretina.
Ary eo no anaovan'ny WINE ny ankamaroan'ny asany satria, ohatra, misy lalao izay miasa tsara amin'ny Windows, miaraka amina programa x napetraka, sns.
Midika koa izany fa raha mampiasa configur Wine ankapobeny ianao dia misy ny lalao izay handeha hiasa tsara kokoa ary ny hafa ratsy kokoa. Noho izany, raha mihazakazaka lalao dia mety ny mihazakazaka WINE mampiasa programa antsoina hoe PlayOnLinux, izay milaza amin'i WINE mihazakazaka Windows voalamina tsara ho an'io lalao io. Ary ahoana?
Ny mpamily video Windows dia tsara kokoa noho ireo Linux
Ny fitsapana rehetra dia manondro fa rehefa mihazakazaka, ohatra, Open Arena, na amin'ny Windows XP na Linux, ao amin'ny Windows dia manipy frame maro kokoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ao amin'ny Windows ny efijery dia havaozina haingana kokoa noho ny amin'ny Linux, izay midika fa manararaotra tsaratsara kokoa ny karatra video.
Tsy mitranga izany satria tsy tompon-tany ny lalao na noho WIN na emulator hafa. Ny fitsapana dia natao tamin'ny alàlan'ny fandefasana ireo tompon-tany tompon'andraikitra isan-rafitra isaky ny rafitra fiasa. Ka? Ny valiny dia hoe, manafoana ireo anton-javatra hafa rehetra, dia mijanona fotsiny ny milaza fa ny mpamily ho an'ny karatra horonantsary ho an'ny Windows dia tsara kokoa (avy amin'ny fomba fijery ara-teknika) noho ny Linux.
Manoro hevitra aho ny hametraka ny kinova beta an'ny divay, satria amin'ny tranga maro dia misy fanatsarana izay tsy ao amin'ireo kinova miorina, ary bebe kokoa amin'ny kinova farany 1.3.28 izay miasa mahavariana sy miaraka amin'ny fanatsarana maro. Raha vantany vao vita ianao dia tokony asiana divay sy Winetricks. Azonao atao koa ny mametraka an'i Lutris, PlayOnLinux y tanim-boaloboka mety tena ilaina izany, fa avelantsika any aoriana.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mametraka DirectX.
Dx divay no fomba tsara indrindra hametrahana DirectX.
Sintomy ny Dx Wine (programa mahafinaritra nataon'i kuboode) izay mametraka mora foana ny DirectX 9c amin'ny divay. Tsara izany ary manome anao safidy aza ianao hanana Dxdiag.
Sintomy Dx Divay
Manana ny safidy hametraka DX10 sy DX11 ianao, miankina daholo na tsia ireo karatra horonan-tsary anananao na tsia.
DxDiag, mety tsara raha fantatrao fa fantatra amin'ny divay daholo ny fitaovana rehetra.
Visual Basic, .Net, sns.
Avy eo, miaraka amin'ny Winetricks dia azonao atao ny mametraka ireto programa manaraka ireto, na dia tsy voatery hatao aza izy ireo, dia mety ilaina ny mihazakazaka lalao.
- dotnet40 (Framework NET 4). Ity dia tsy miseho amin'ny Winetricks. Azo apetraka amin'ny tanana.
Betsaka ny zavatra apetraka. Jereo tsara ireo safidy omen'ny Winetricks. Ny zavatra ilainao dia miankina amin'ny masininao sy ny rindranasa tianao hampiasaina. Na izany aza, ny voalaza etsy ambony dia azo lazaina ho farafaharatsiny ary ilaina indrindra.
Amboary ny safidinao divay
Sokafy Winetricks ary safidio ny "Select the default wineprefix" sy "Change setting". Ho ahy ny fikirakirana tsara indrindra dia ity:
- dsoundhw = Fanahafana
- glsl = kilemaina
- multisampling = kilemaina
- mwo = mandeha
- npm = mamerina
- psm = mandeha
- feo = alsa
- hentitra fanaraha-maso = kilemaina
- vd = off
Amin'ireo safidy ireo dia misy 2 manatsara ny fahombiazan'ny vokatra
- OffscreenRenderingMode, rehefa mametraka ny fisafidianana FM (Framebuffer) dia manipy sary maro, mihamangatsiaka ary manao zavatra mitovy hatrany hatrany. Ka ny lalao rehetra dia tsy azo lalaovina. Izany no antony anolorana ny backbuffering.
- Feo mivantana: Fanafainganana ny fitaovana, fanovana tanteraka ho fanahafana. Mampitombo be indrindra ny fampisehoana sy ny fifanandrinana amin'ny "feno".
Ary koa, hahazoana ny zava-bita, azonao atao ny manafoana ny GLSL sy MultiSampling, saingy very ny kalitaon'ny sary.
Raha tsy mahamarika ilay karatra horonantsary i WINE, na dia aorian'izany rehetra izany aza, dia ataovy izany:
Vantany vao nanova ny safidy ianao dia nosokafako ny lahatahiry .wine tao amin'ny fampirimana nataonao ary avy eo nosokafako ny fisie antsoina hoe "user.reg" (ny lakilen'ny rezistra noforonin'ny mpampiasa dia voatahiry ao).
Mitadiava [SoftwareWineDirect3D] ary amin'ny farany ampio:
"VideoDescription" = "Ampidiro ny maodely karatra horonan-tsary misy teny nalaina" "VideoDriver" = "nv4_disp.dll" "VideoMemorySize" = "Ampidiro ny fahatsiarovana ny karatra horonantsary"
Raha ny amiko dia toa izao:
[SoftwareWineDirect3D] 1318967087 "DirectDrawRenderer" = "opengl" "Multisampling" = "disable" "NonPower2Mode" = "repack" "OffscreenRenderingMode" = "backbuffer" "PixelShaderMode" = "ahafahana" "RenderTargetLockMode" = "auto" Strict "disable" "UseGLSL" = "disable" "VideoDescription" = "GeForce 7025 / nForce 630a / PCI / SSE2 / 3DNOW!" "VideoDriver" = "nv4_disp.dll" "VideoMemorySize" = "512"
Vonona! Vonona hiady i WINE!
Efa mampiasa WIne, Dx divay ary Winetricks izahay. Ankehitriny dia hanatsara izany rehetra izany izahay amin'ny alàlan'ny programa antsoina hoe Lutris.
Fampidirana an'i Lutris
Lutris miaraka amin'ireo hadisoako lehibe indrindra ...
Lutris dia programa iray izay manangona ny lalao rehetra amin'ny sehatra tokana, zavatra mitovy amin'ny Steam.
Ny mampiavaka azy dia ny manohana SAFIDITRA REHETRA, fa jereo ny lisitry ny zavatra any amin'ny banky:
- Lalao teratany Linux.
- Lalao Windows zanatany.
- Lalao MAME.
- Namana 500, 600, 1200.
- Lalao an-tserasera avy amin'ny mpitsidika, toy ny Quake Live, Minecraft ary ny flash rehetra.
- LucasArt SCUMM (Monkey Island, Maniac Mansion, sns).
- Nintendo NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, Gamecube ary Wii.
Fa ny tsara indrindra dia ny safidy isaky ny lalao dia manome safidy maro ianao, noho izany dia TSY MAINTSY ATAO fa ampiasainao izany, satria misy safidy maro divay, izay miankina amin'ny lalao azonao ovaina, tsy misy fiantraikany amin'ny divay na ny lalao hafa. Tahaka ny PlayOnLinux, saingy toa tsara kokoa amiko i Lutris, satria tsy vitan'ny hoe manome anao ny fidirana amin'ny lalao Windows izany, fa amin'ny emulator marobe.
Ampidino i Lutris
Eto am-pamaranana dia lazao fa tsy misy fanatsarana lehibe ao amin'ny Lubuntu sy Xubuntu. Mety hisy hieritreritra fa ny fampiasana fitadidiana RAM kely kokoa dia hisy fiatraikany amin'ny zava-bitan'i WINE, saingy tsia. Mety hitranga izany satria ny divay dia mampiasa CPU sy carte de vidéo amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fomba filalaovana lalao Windows amin'ny Linux
vitsy dia hoy izy:
NY WINE dia tsy emulator.
Shadow_Warrior dia hoy izy:
Izany dia izao, alohan'ny tena dikan'ny hoe "WINdows Emulator" ("WINE")
Mamaly an'i Shadow_Warrior
Jereo hoe taiza aho no nitady zavatra toy izao ankehitriny izao rehefa nanomboka nanandrana nametraka lalao windows tamin'ny Linux aho. Afaka nametraka sy nilalao zavatra efatra Quake 3, Half-Life 1, ary Age of Mythology aho. Fa te hanandrana ny GTA 3 aho (izay mametraka azy fa tsy mahita ny cd rehefa milalao) sy Jedi Knight 2 izay manome ahy lesoka.
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity.
Te-hametraka lalao PC3 amin'ny Windows 7 aho fa tsy hanomboka satria tsy mifanentana ka nieritreritra aho fa raha azo ovaina na ovaina mba hahafahan'ny Linux manohana azy dia hitahy ahy tsara izany. Mangataka aho satria zazalahy 10 taona aho
Lalao inona izany?
ADIRAEL dia hoy izy:
Tiako ny fandidiana 7 an-tserasera sy ny cabal an-tserasera manana olana aho amin'ny fihazakazahana amin'ny varavarankely ny fandidiana 7 mila mihazakazaka amin'ny Win XP aho satria na dia apetrako bebe kokoa aza ny fahatsiarovako ram ao amin'ny solosaiko dia tsy feno amin'ny win7 izy ary betsaka kokoa ny cabal. ny ankehitriny sy ny fiatraikany bebe kokoa dia tsy mandeha amin'ny win xp fa raha mihazakazaka feno amin'ny win7 dia halako ireo voafitaka amin'ny alim-baravarana ireo! Misy foana ny tsy fitoviana amin'ny zavatra iray hafa ankoatry ny fihinanana ny harenako rehetra mba hahafahako milalao zavatra mahaliana dia mila misintona ny rafitra iray manontolo amin'ny GAME BOSSTER sy amin'ny TUNAP UTILES aho ary na dia tsy feno aza aho dia tiako ho fantatra raha OPERTION 7 no azo tanterahina amin'ny linux izao io operation7 io dia tsy manova firaketana na zavatra hafa toa izany fa manana antsipiriany izy fa tsy ampy ny maka tahaka sy mametaka ny fampirimana lalao amin'ny pc hafa dia mila maka tahaka fampirimana apetrakao amin'ny kapila c koa ianao ary antsoina hoe LIN izay raha vao jerenao ianao Hitanao io ary tsy raisinao ao anaty kaonty pss taty aoriana dia tsapanao fa ilay fampirimana tadiavin'ny executable rehefa manomboka izy io ary misy ny làlana tokony harahina ary ny mombamomba ilay kinova INDRINDRA IZAY TE HAMONJINAO RAHA AMIN'NY PROGRAMAO AZONAO AZO ATAO TSY MISY OLANA. NY .FOMPAN'NY GAME ARY IZAO koa dia mamantatra ahy ilay mpiambina ROUTE TSY MISY fahasimbana
Valiny amin'i ADIRAEL
Miquel Mayol sy Tur dia hoy izy:
noho izany, ny lisitry ny mifanentana amin'ny winehq sy playonlinux dia mampahafantatra anao ireo lalao 100% ok, ary ireo izay mbola tsy mandeha tsara mihintsy.
Lahatsoratra tsara !!
Manantena aho fa rehefa mandeha ny fotoana, manomboka manangana kilalao avo lenta ho an'ny GNU / Linux ny orinasa, dia ho tonga saina amin'ny fahafantarana fa efa misolo tena ampahany betsaka amin'ny mpampiasa tanteraka ny mpampiasa Linux….
Miaraka amin'ny AOM mihazakazaka miaraka amin'ny Titans expasion dia raisiko ho zava-dehibe izany, io no hany lalao tiako momba an'i Güindos XD, fantatrao noho ny fanamby ataon'ny namana sy ny fianakavianao.
Tsy afaka misintona lutris aho .. 🙁
Azonao omena ahy ny rohy hampidinana ny divay, Winetrick ary Lutris REHETRA
inona ny tranonkala
Mamaly an'i juan manuel
Dan dia hoy izy:
Ny zavatra iray ananako pentium III an'ny 0.8ghz sy ondrilahy 650mb, ahoana no fomba anaovako izany rehefa mihinana kely ny warcaft 3 ao anaty divay dia rehefa afaka kelikely dia manomboka miadana aho ary satria tsy manana windows .. .
Mamaly an'i dan
Paul dia hoy izy:
Tsy azoko, indraindray amin'ny forum sasany dia mitsikera be loatra amin'ny windows izy ireo, milaza fa vola madio (izay marina indraindray) fa amin'ny farany dia te-hisintona directx izy ireo. Mino aho fa samy manana ny lesoka ny windows sy ny linux, ary PRODUCTS izy ireo. Linux dia tena ilaina amin'ny programa, server, internet ary indostria. Raha Windos dia ilaina kokoa amin'ny trano, izany hoe, amin'ny lalao, antontan-taratasy, internet, sns.
Ohatra, ho an'ny wifi, sy ny fotodrafitrasa Internet, ny linux dia tsara lavitra kokoa. Fa ny milalao dia tsy izany.
Valiny tamin'i Paul
ny fomba fametrahana ny divay dx
kuk dia hoy izy:
indray andro any dia hanana safidy hafa ao amin'ny linux isika 😉
Mamaly an'i kuk
Eddy holliday dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara, ho hitako raha afaka mampiasa azy amin'ny Manjaro Linux aho
Valiny tamin'i Eddy Holliday
gabux22 dia hoy izy:
Miaraka amin'i lutris sy ny orinasa dia lafo vidy ny milalao amin'ny Linux ... misaotra an'i UsemosLinux sy cia. indray mandeha io dia mamboly antsika amin'ny tontolon'ny GNU / Linux… fisaorana feno .. 🙂
Mamaly an'i gabux22
Tsisy fisaorana! Mamihina!
Salama, manana olana aho ary nanandrana naka ny divay DX aho fa nanomboka teo http://sourceforge.net/projects/dxwine/ Tsy misy intsony io, tsy haiko raha misy fomba hafa hampidinana azy.
Juan Jose dia hoy izy:
azo ampiasaina miaraka amin'ireo programa ireo ve ny lalao windows?
Mamaly an'i Juan jose
deimer dia hoy izy:
Salama tsara fa manana ubuntu 15.10 aho tsy afaka nisintona lalao satria tsy manokatra olona afaka manazava amiko izay tokony hatao izany
Mamaly an'i deimer
QKingsta dia hoy izy:
Puff! Mijanona ao amin'ny Windows aho dia mora kokoa ny misintona, mametaka ary milalao noho io shit amin'ny fisintomana toy ny programa 3 na 4 io ary aforeto avy eo hahafahan'izy ireo milalao lalao. Linux dia natao ho an'ny olona izay programmer na izay mamorona tambajotra sy mpizara fa tsy natao ho antsika izay tia lalao video.
Valiny amin'i QKingsta
Ity fampianarana ity dia ho an'ny filalaovana amin'ny Linux miaraka amin'ny lalao voasoratra ho an'ny Windows. Ny lalao nosoratana ho an'ny asan'ny Linux ao amin'ny Linux dia toy ny lalao nosoratana ho an'ny Windows ao amin'ny Windows ihany: Mametraka azy ianao ary dia izay.
Anontanio ny tenanao izao hoe ahoana no ahafahanao milalao amin'ny Windows miaraka amin'ny lalao voasoratra ho an'ny Linux, ary raha mora kokoa aminao io noho ny mifanohitra amin'izay, azonao atao ny milaza fa mitsoka Linux.
Io no valiny tsara indrindra hitako nandritra ny taona maro
Rafael Portillo T. dia hoy izy:
Misaotra ny mpampianatra ...!
Valiny tamin'i Rafael Portillo T.
Ahoana ny fomba handefasana Ubuntu amin'ny maody an-tsoratra
Sary masina tsara ho an'ny Trakitra KDE